ZANU PF under fire over Ndebele language - Bulawayo24 News
15 Dec 2019 at 10:26hrs | Views
The ZANU PF National People's Conference has condemned for failing to have a Ndebele interpreter at its 18th ZANU PF National Peoples Conference.
Political analyst kelvin Mazhandu said, "During the Robert Mugabe era The norm has been that Absolom Sikhosana interprets speeches from Shona to Ndebele for the benefit of the 3 Matebeleland provinces that are predominantly Ndebele speaking. This time conference ignored the linguistic needs of Bulawayo, Mat North and Mat South."
During the Conference Fortune Chasi the Minister of Energy tried to give part of his report in Ndebele and was heckled by the crowd while other politburo members stopped him from using Ndebele.
Mazhandu added that, "It was also shocking that most politburo members including the National Chairperson Oppah Muchinguri did not recognise the National Secretary for Administration Dr Obert Mpofu who is the second most senior high ranking ZANU PF official from Matebeleland."
Some Conference participants from Matebeleland, Midlands and Bulawayo who spoke to this reporter expressed concern over the blatant disregard for the Ndebele community, who were reduced to by standers at the National Conference.
More on: #Mnangagwa, #ZANU_PF, #Kelvin_Mazhandu